KAOMININA ANDRAMASINA: Mandray anjara mavitrika amin’ny fambolen-kazo ny Vondrona Axian – Madatopinfo
Loza mitatao, misy fiatraikany ratsy mivantana amin’ny andavanandron’ny malagasy ny fahasimban’ny tontolo iainana ateraky ny loto, ny setroka, ary indrindra ny fandripahana ny ala. Ka iray amin’ireo sehatra 4 iadidian’ny Fondation Axian ny lafiny ara-tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy. Ho fampiharana io sehatra io, nanatanteraka fambolen-kazo tao amin’ny Kaominina ambanivohitra Andramasina ny fianakaviamben’ny Vovonana ACT – Axian Communities Team ny herinandro lasa teo. Izany no natao dia ho fampiroboroboana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ho fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao an-toerana. Hioty vokatsoa maro tokoa mantsy ireo mponin’Andramasina satria tantsaha manodidina ny 30 ao aminy no mpiara-miombon’antoka sy mpisitraka tombotsoa amin’izany. Araka ny fampitam-baovao, ambolena amin’ny taniny ny voly ary izy ireo ihany no hisitraka mivantana ny vokatra avy eo. Fantatra fa karazan-javamaniry miisa 17 samy hafa avokoa no ambolena amin’izany, ohatra amin’ireo ny hazo fihinam-boa toy ny paiso sy ny paoma, eo ihany koa ny ravintsara izay manome loharanom-bola mivantana ho an’ny mpisitraka. Ireo hazo novolena ireo araka izany dia hanampy betsaka ny fidiram-bolan’ireo mponina.
Tsiahivina fa nanatontosa fanaovan-tsonia fiaraha-miasa ny orinasa Bôndy sy ny Fondation Axian amin’ny fanatanterahana fambolen-kazo ao amin’ny Kaominina Andramasina amin’ny tany mirefy 24 hektara. Ny ACT – Axian Communities Team kosa dia ireo mpirotsaka an-tsitrapo miisa 150 eo anivon’ireo orinasa 15 an’ny Vondrona Axian eto Madagasikara. Mandritra ny 5 taona mantsy dia hazo miisa 25.000 no hovolena miampy ny fanaraha-maso hentitra ireo zava-maniry voavoly. Azo antoka araka izany fa hitondra fiovana ho an’ny mpiray tanindrazana tokoa izao hetsika ACT ao anatin’ny Vondrona Axian izao indrindra ny eo amin’ny lafiny tontolo iainana.